China ASS ngwaahia 10 nke anụ ọhịa ahụ na video katalọgụ kaadị azụmahịa azụmahịa n'akpa uwe ọrụ maka mgbasa ozi azụmahịa rụpụta na Factory | VideoBrochure
ASS ahaziri 10 anụ ọhịa ọkọlọtọ video katalọgụ broshuọ kaadị azụmahịa ọrụ n'akpa uwe ọrụ maka mgbasa ozi azụmahịa
Na AKWCHKWỌ VIDEO ma ọ bụ Kaadị vidiyo a na-ebipụta nkwakọ ngwaahịa nwere ihu igwe LCD dị omimi, mbadamba PCB, ube na batrị lithium na-ebugharị yana njikọ USB nke na-enye ohere maka mgbanwe vidiyo na ịmeghachi ngwaọrụ.
Mpempe akwụkwọ vidiyo nke kaadị vidiyo dị mma maka ngosi, nkwalite, mgbasa ozi, agbamakwụkwọ, ekele, ịkpọ oku na ederede ma ọ bụ nkwalite ụlọ ọrụ.
Gịnị mere broshọ vidio ji arụ ọrụ?
N'ihi na ha na-emekọrịta ihe nke ọma na mmekọrịta, ha na-ebipụ dị ịtụnanya ...
Bipute na vidiyo na-arụ ọrụ nke ọma dịka ha na-ebugharị ma nwee ọtụtụ sensory. na-eme ka mkpọsa gị rute.
"Anyị nọ na usoro iheomume siri ike ma chọọ broshuọ vidiyo ngwa ngwa. Alan nabatara nke ọma ma nye ọrụ onwe onye na nke ọkachamara dị mkpa iji mezuo iwu anyị n'oge."
"Ezigbo ọrụ & ogo ọrụ - mepụtara ngwa ngwa karịa ka a tụrụ anya buut!" "Ọrụ dị mma ma gbanwee oge site n'itinye iwu iji nweta broshuọ vidiyo juru anyị anya!"
Ncheta & Oge Egwuregwu Egwuregwu (atụmatụ & nduzi naanị):
Enwere ike ịrụ ọrụ site na mbido akpaaka na mmeghe, ngbanwu / ngbanwu, ma ọ bụ, ihe mmetụta ngagharị. Vidio nwere ike ịmegharị (ịpịgharị), ma ọ bụ nọrọ na njikere ozugbo ọkpụkpọ zuru ezu. Enwere ike ịchekwa vidiyo vidiyo ruo otu broshuọ.
128 MB (ruo 7 min), 256 MB (ruo 15 min), 512 MB (ruo 30 min), 1 GB (ruo 60 min), wee gabazie *** Oge egwuregwu bụ mkpakọ vidiyo na Ọkpụkpọ eji.
Lithium Polymer na-agbanye 500 MA nwere ike iji awa anọ na-aga n'ihu. Batrị buru ibu buru ibu ruo 8000 mA dị.
Ihuenyo mmetụ aka:
Buut / Logo ihuenyo:
On / gbanyụọ, họrọ vidiyo, kpọọ / kwụsịtụ, na-esote / FF, prev / REW, olu elu, olu ala. You nwere ike ruo bọtịnụ iri.
Dị na 4.3in, 5.0in, 7.0in, & 10.1in screens. Aka njikwa nke olu & faịlụ ndekọ.
Abụkarị a ụlọ ọrụ logo ma ọ bụ ngwaahịa shot nke ga-egosipụta maka 1-2 sekọnd mgbe video na-booting elu. Ma ọ bụ, ihuenyo logo nwere ike ịnọ na njikere ruo mgbe ahọpụtara bọtịnụ vidiyo.
Nke gara aga: Mpempe akwụkwọ azụmahịa azụmahịa Astrazeneca 7inch nwere obere azụmaahịa azụmaahịa kaadị kaadị azụmahịa
Osote: Mpempe akwụkwọ LCD vidiyo foto ọla ọla olu nkwakọ onyinye kaadị ekele
Dijital Kaadị Azụmaahịa Video
Kaadị azụmahịa Lcd
Kaadị azụmahịa azụmahịa Lcd
Video Kaadị azụmahịa Business Card
Kaadị azụmahịa vidiyo
Video Business Kaadị Ihe Nlereanya
Kaadị azụmaahịa vidiyo Ahịa
Video Editor Kaadị azụmahịa
Kaadị Azụmaahịa Production Video
Onye na-ese foto Business Card
Generation Ikuku Earphone ikuku pro 3 Na BT ...
Ahaziri Merry Christmas Creative 4.3 Inch LC ...
Elie Saab 7 inch lcd tft ihuenyo vidiyo broshuọ ...
43 inch ala guzo anwansi mirror iko adver ...
IDW Advertising BMW Car version 7 nke anụ ọhịa LCD Vide ...
Mercedes Benz Car Video Broshọ & Kaadị, LCD ...